दुई महिना रिह्याब सेन्टरमा बसिन् ऋतिक रोशनकी दिदी सुनैनाः भन्छिन्, ‘आमा–बुवाबाट अलग्गिन चाहन्छु’
भदौ २९, २०७६ ११:१७:४६
जेठ २९, २०७६ हेटौंडा खबर
ऋतिक रोशनकी दिदी सुनैनाले रक्सीको लतका कारण आफू दुई महिना रिह्याब सेन्टरमा बसेको खुलासा गरेकी छिन् । स्पटबोयको खबरका अनुसार उनले यो कुरा अन्तरवार्तामा बताएकी हुन् ।
रिपोर्टमा बताए अनुसार सुनैनाले आफ्नो असफल सम्बन्धका कारण रक्सी पिउन सुरु गरेकी थिइन् । जब यसै वर्ष जनवरीमा उनका पिता राकेश रोशन घाँटीको क्यान्सरको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए तब उनी रिह्याब सेन्टरमा उपचार लिइरहेको उनले बताइन् ।
सुनैनाले यसकारण बताइन् आफ्नो कहानीः
सुनैनालाई विश्वास गर्ने हो भने आफ्नो कहानी सुनेर अरु मानिसहरु प्रेरित होउन् भन्ने उद्देश्यले यसबारे खुलासा गरेकी हुन् । धेरैले उनलाई मानसिक रोग लागेको भन्ने चर्चा पनि गरेका थिए, यसबारे प्रश्न सोध्दा उनी भन्छिन्, ‘सबै बकवास हो । मानिसहरुले मेरा बारे नयाँ अफवाह फैलाइरहेका छन् । कसैले म अस्पतालमा भर्ना भएकी छु भनेर झुटो खबर फैलाएका थिए । म स्वस्थ छु र मानसिक रोगी होइन । हो, केही मुद्दा भने पक्कै छन् ।’
म अभिभावकको घर छोड्न चाहन्छुः
सुनैनाले मुद्दाबारे जानकारी दिँदै भनिन्, ‘म आफ्नो घर छोडेर अलग बस्न चाहन्छु । म लगातार आफ्ना अभिभावक (राकेश र पिंकी रोशन) को निगरानीमा बस्न सक्दिनँ । यस्तो नगर, रक्सी नपिउ, यो केटालाई नभेट । मेरा ड्याड र मम अत्यधिक प्रोटेक्टिभ भएका कारण आफूलाई क्लस्टरोफोबिक महसुस गर्न थालेकी छु । यदि मैले कुनै रात रक्सी पिएँ भने म कसरी जँड्याहा हुनसक्छु ? यदि म साथीहरुसँग पार्टी गर्छु भने यसमा के नराम्रो छ ? कुनै केटालाई भेट्दा के गलत छ ?’
पैसाको समस्याले अलग्गिन सकेको छैनः
जब सुनैनालाई आमा–बुवासँग अलग हुन आखिर कसले छोकिरहेको छ भन्ने प्रश्न सोध्दा उनले भनिन्, ‘पैसा छैन । अँधेरीस्थित ओबरोय स्प्रिंग्समा मलाई एउटा घर मन परेको थियो तर अत्यधिक भाडा चुकाउन सक्दिनँ । करिब एक महिनाअघि जुहुस्थित परिवारको घर छोडेर बान्द्राको एउटा होटलमा सरेकी थिएँ । उहाँहरुले शनिबार मलाई ललाईफकाई गरी फिर्ता लानुभयो । अब मसँग अलिकति पनि पैसा छैन । यदि ऋतिक अलग्गिन सक्छ भने म किन सक्दिनँ ?’
म मेरा आमा–बुवालाई अत्यधिक माया गर्छुः
सुनैना थप्छिन्, ‘म आफ्ना अभिभावकलाई अत्यधिक माया गर्छु । एकातर्फ म उहाँहरुको कुरा बुझ्छु तर आफ्नो स्पेस र घर पनि चाहन्छु । उहाँहरुले ममाथि विश्वास गर्न आवश्यक छ । म उहाँहरुलाई निकै माया गर्छु । के म गलत माग गरिरहेको छु ? ’
सुनैनाले दुईपटक विवाह गरिसकेकी छिन् । उनको पहिलो विवाह व्यवसायी आशिष सोनीसँग भएको थियो जसबाट उनको करिब २१ वर्षकी छोरी (सुरानिका) छिन् । सन् २००० मा यो जोडी अलग्गियो । सुरानिका अब अमेरिकामा पिता आशिष र सौतेनी आमा सोनालीसँग बस्छिन् ।
आशिषसँग सम्बन्धविच्छेद गरेको करिब १० वर्षपछि जनवरी २०१० मा सुनैनाले क्यानडाका व्यापारी मोहन नागरसँग विवाह गरेकी थिइन् ।
प्रकाशित मिति: बुधवार, जेठ २९, २०७६, ०६:०६:००
बलिउड अभिनेत्री सनी लियोनीलाई लिड रोलमा लिएर नयाँ फिल्म बन्ने, लण्डनमा शूटिङ हुने
पोर्नस्टार भन्छिन् :नेपाली फिल्ममा काम गर्ने मन छ
फ्राइडे रिलिज: पोर्नस्टारको ‘पासवर्ड’ प्रदर्शनमा
‘प्रेम संसार’ को पहिलो गीत सार्वजनिक
पोर्नस्टार सन्नी लियोन आज नेपाल आउँदै
भदौ २६, २०७६ हेटौंडा खबर
पोर्नस्टारबाट परिचय बनाएकी बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी बिहीबार पुनः नेपाल आउँदै छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
सलमान खानको ‘दबंग–३’ को फर्स्टलुक सार्वजनिक
सलमान खानको आगामी चलचित्र ‘दबंग–३’को फर्स्टलुक सार्वनजिक भएको छ। पुरा पढ्नुहोस्